"Haddii Aanad Xasillooni ama Badqad Dareemayn, Maaha In Lagugu Qasbo Inaad Shaqada Kusoo Laabato" - Henderson Oo Farriin U Diray N'Golo Kante - Gool24.Net
“Haddii Aanad Xasillooni ama Badqad Dareemayn, Maaha In Lagugu Qasbo Inaad Shaqada Kusoo Laabato” – Henderson Oo Farriin U Diray N’Golo Kante
22/05/2020 Abdiwahab A. Abeye
Kabtanka kooxda Liverpool, Jordan Henderson ayaa farriin u diray Laacibka khadka dhexe uga ciyaara Chelsea ee N’Golo Kante oo la sheegay in xili ciyaareedkaba uu kooxdiisa uga maqnaan karayo baqasho la xidhiidha badqabkiisa iyo Troy Deene oo isaguna caafimaadka qoyskiisa u baqaya.
Jordan Henderson waxa uu sheegay inuu ixtiraamayo go’aanka labadan ciyaartoy ee ku aaddan xaaladdooda, laakiin waxa kale oo uu ku taliyey in la tixgeliyo kuwa go’aankoodu yahay in ciyaaraha dib loo bilaabo.
Ciyaartoyda horyaalka Premier League ayaa Salaasadii kusoo laabtay tababarka, balse kabtanka Watford ee Deeney ayaa si cad u diiday inuu kooxdiisa ku biiro, halka uu N’Golo Kante maalintii ugu horreysay kasoo xaadiray tababarka kaddibna la fasaxay maadaama ay haysay cabsi.
Labadan ciyaartoy kalidood kuma aha diidmada, waxaase jira ciyaartooyo kale oo uu ka mid yahay Raheem Sterling iyo kuwo kale oo rumaysan in nafta binu-aadamka aan lagu ciyaarin.
Kabtanka Liverpool ee Jordan Henderson ayaa waxa uu ciyaartoydan u sheegay in aan ahayn in lagu qasbo inay soo laabtaan haddii ay dareemayaan baqasho, waxaanu yidhi: “Si buuxda ayaan u ixtiraamayaa fikirkooda iyo go’aankoodaba. Waxay ila tahay in qof walba uu xaalad gooni ah kula jiro qoyskiisa iyo gurigiisa. Haddii aydaan dareemaynin degganaan ama badqab, maaha in la idinku qasbo ama cadaadis la idinku saaro inaad shaqada kusoo laabataan.”
Jordan Henderson waxa uu sheegay in isagu shaqsiyan uu dareemayo in caafimaad loo baqdaa aanay jirin, waxaanu yidhi: “Qof walba xaalad gooni ah ayuu ku jiraa, aniga ahaan, waxaan halkan garoonka tababarka ku dareemayaa badqab, haddii aanay jiri lahayna, halkan ba maan imaaddeen. Ciyaartoyda kooxdayduna waa sidaas oo kale.”